आइतवार बैंकको शेयरमूल्य २ अंक घटेर रू. २६३ कायम भएको छ । सो दिन बैंकको १८ हजार १९५ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । बैंकले ३० लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असार ४ गते स्वीकृति पाएको छ । ३० लाख कित्तामध्ये १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत संघसंस्थालाई विक्री गर्नेछ ।
बैंकले १० दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा २०८५ सम्मका लागि ऋणपत्र जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको हो । विक्रीप्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब २४ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४५ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा बैंकले रू. ८५ करोड ४० लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. ९८ करोड १८ लाख छ ।
2019-07-08 - 127 view(s) - abhiyan